ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကြက်သွန်ဖြူစိုက် တောင်သူများ ဝယ်လက် မဆင်း၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှုများ ? - Yangon Media Group
ဆားလင်းကြီး၊ ဇူလိုင် ၂၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်မှ ကြက်သွန်ဖြူစိုက်တောင်သူများ ကြက်သွန်ဖြူဝယ်ပွဲစားများ နယ်သို့ဆင်းမဝယ်သည့်အတွက် အခြားကြက်သွန်ဖြူမထွက်သည့် နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်၍ လက်လီရောင်းချနေသော်လည်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုများကြုံ နေကြရကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်မတို့က ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် သာယာကုန်းရွာကပါ။ အရင်နှစ်ကဆိုရင် ကြက်သွန်ဖြူတစ် ပိဿာကျပ်သုံးထောင်ကျော်ရောင်းရတယ်။ အိမ်တိုင်ယာရောက်လာ ဝယ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့ အဲဒီလိုလာဝယ်သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီနှစ်က ကြက်သွန်ဖြူမေးတဲ့ပွဲစားကိုမရှိတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ငွေကလည်း လိုနေတာဆိုတော့ အခြားအရပ်တွေမှာလည်း တစ်ပိဿာကျပ် ၁၅ဝဝ နှုန်းနဲ့ရောင်းနေရပါတယ်။ အခြားအရပ်ဒေသကြက်သွန်ဖြူရှားတဲ့နေရာတွေမှာလည်း တစ်ပိ ဿာကျပ် ၁၂ဝဝ ပဲရှိနေတယ်။ ကျွန်မတို့ကတော့ တစ်အိမ်ဆင်းတစ်အိမ်တက် ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေ တွေဆီ အိမ်တိုင်ယာရောက်ရောင်း နေရပါတယ်”ဟု တောင်သူကိုယ် တိုင်အခြားအရပ်သို့ ကြက်သွန် ဖြူလက်လီရောင်းချနေသည့် ဒေါ်လင်းဇာနည်ဇော်က ပြောသည်။
ယခုနှစ်တွင် ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ဧကလျှင် ပိဿာရာချီရရှိ ကြောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူအထွက် ကောင်းသော်လည်း ဝယ်သူမရှိသကဲ့သို့ ပွဲစားလည်းမရှိကြောင်း၊ တစ်ပိဿာငွေကျပ် ၈ဝဝ ဈေးဖြင့် ရောင်းချသော်လည်း ဝယ်သူမရှိ သဖြင့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှု များကြုံနေရကြောင်း သာယာ ကုန်းကျေးရွာကြက်သွန်ဖြူစိုက် တောင်သူဒေါ်သေးသေးထံမှ သိရသည်။
ပရိသတ်များ ငွေသုံးရကျိုး မနပ်သည့် ခြေစမ်းပွဲများဟု မော်ရင်ဟို ဝေဖန်၊ ရာသီအစကို လွဲရချော်မ??
ဘင်္ဂါလီများကို ပြန်ခေါ်ရန် မြန်မာအစိုးရ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု အခိုင်အမာယုံကြည်၊ တရုတ်နိုင်ငံ